Top 6 máy xay Magic chính hãng chất lượng, giá tốt nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 máy xay Magic chính hãng chất lượng, giá tốt nhất | Muasalebang in Muasalebang
Kwe umshini wokugaya, I-blender ngokushesha waba umsizi ophumelelayo wamakhosikazi asekhaya ohlelweni lokulungisa ukudla. Umkhiqizo uhlale uletha ukudla okunempilo kuwo wonke umndeni. Ake sidlule kukho ndawonye Top 6 Magic blenders Ikhwalithi yanamuhla ehamba phambili yenza kube lula kuwe nomndeni wakho ukuthola uthando lwekhishi lakho.
1 Mayelana ne-Magic blender brand
2 Izizathu zokuthenga i-Magic blender
3 Izixube ezi-6 ezidume kakhulu zomlingo namuhla
3.1 3.1 Inhlamvu yomlingo i-WM-568
3.2 3.2 Magic bullet AC15
3.3 3.3 Inhlamvu yomlingo A96
3.4 3.4 I-magic bullet grinder yenyama A04
3.5 3.5 Magic bullet A14
3.6 3.6 Magic bullet A21
4 Amanothi lapho usebenzisa i-Magic Bullet blender
Mayelana ne-Magic blender brand
Umlingo wuhlobo oludumile lwaseKorea olunemigqa yomkhiqizo esebenza impilo yansuku zonke yemizi. Lo mkhiqizo, ogama lawo eliphelele iMagic Korea, lasungulwa ngo-1990 ngenhloso yokwenza izimpilo zabantu zibe ntofontofo.
Umlingo usabalale, uhlanganisa amazwe angaphezu kuka-60
Ngakho-ke, imikhiqizo eyethulwa emakethe namuhla isezingeni eliphezulu, ikhonza izidingo zabathengi emhlabeni jikelele. Njengamanje, umlingo usabalalise futhi umboze amazwe angaphezu kuka-60 ngemigqa yomkhiqizo ebalulekile efana nama-blenders, amapani, ama-grill, I-Magic air fryer.Ikakhulukazi ngomkhiqizo we-blender, owenza ukuchaphaza emakethe kagesi yasendlini, okusiza umkhiqizo ngokuqhubekayo ugomela isikhundla sawo esibalulekile ezinhliziyweni zabathengi.
Emakethe yaseVietnam, umkhiqizo uvele eziteshini eziningi zokukhangisa zethelevishini futhi kancane kancane ujwayele abathengi basekhaya. Kungakho ama-Magic blenders ahlala efunwa futhi ngokushesha abe yimikhiqizo enokuthengiswa okuphezulu ezitolo ezinkulu zikagesi kanye nakuma-ejenti ayo okusabalalisa.
Izizathu zokuthenga i-Magic blender
I-Magic Bullet Blender ethenjwa ngabathengi abaningi ukuthi bakhethe futhi basebenzise inqubo yokupheka, ngenxa yokuphepha kwayo okuphezulu kwezempilo kanye nezinto ezilula ezilethwa empilweni yanamuhla yemindeni yaseVietnam. Umklamo walo mugqa mncane kakhulu, awuthathi isikhala esiningi ekhishini.
I-blade iyakwazi ukugaya ukudla ngesivinini esikhulu namandla, ama-mortars ayenziwe ngezinto eziphephile, hhayi eziyingozi empilweni yomndeni wonke. Umkhiqizo unesisekelo esingasheleli sokuqinisekisa ukuthi umshini ume uqinile lapho usebenza.
Umshini uletha ukuphepha kwezempilo kanye nokuba lula empilweni yesimanje
Imisebenzi yemishini yomlingo ihluke kakhulu, igaya ukudla okuningi okuhlukene. Ikakhulukazi, imikhiqizo yalo mkhiqizo ingakwazi ukucubungula ngokuzenzakalelayo zonke izinhlobo zobisi lwe-nut, iziphuzo, ngokushesha, okuyinto imikhiqizo evamile engenayo.
Buka Okuningi: [Review] Ama-Juicers angu-8 Ahamba Phambili Ashibhile
Izixube ezi-6 ezidume kakhulu zomlingo namuhla
Top 6 Magic blenders Okulandelayo yimikhiqizo yomkhiqizo eyaziswa kakhulu abathengi futhi enokuthengiswa okuhle kakhulu namuhla, ukuze wena nomndeni wakho ningaphuthelwa.
3.1 Inhlamvu yomlingo i-WM-568
I-Magic Bullet Blender Inomklamo okabili owenza inqubo yokugaya isheshe futhi ihluke. Impahla yesitsha yenziwe ngengilazi engu-5.5mm obukhulu, enamandla angu-1.2 amalitha ukusiza umthamo wokudla okugaywe ngesikhathi esifanayo. Lo mshini uyakwazi ukugaya inyama nenhlanzi entsha kanye nezinongo ekuphekeni okufana nopelepele, okulethela omama bamakhaya ithuba lokupheka.
Lapho ukusebenza kugcwele kakhulu, inzwa eshisayo izowanqamula ngokuzenzakalelayo amandla ukuze umshini uyeke ukusebenza ukuze uvikele injini ngaphakathi. Ukuqaqa umshini ngesikhathi sokusetshenziswa kulula kakhulu ukwenza kube lula kuwe enqubweni yokuhlanza.
Amandla okusebenza omshini we-Magic bullet WM-568 angama-200W, angagcini nje ngokufinyeza isikhathi sokupheka kodwa futhi alondoloze amandla aphezulu uma esetshenziswa. Lo mkhiqizo uthengiswa nge-360,000 VND emakethe namuhla.
Bhekisela: [Review] Izixube eziyi-8 zangempela zezandla ze-Braun ezizothengwa kakhulu
3.2 Magic bullet AC15
I-Magic Bullet AC15 blender ifakwe izimbiza zezingilazi ezi-2, ezihlakazeka kakhulu futhi zimelana nokuklwebheka. I-motor isebenza ngokuqinile inamandla afinyelela ku-300W, i-grinder yenziwe ngensimbi engagqwali ebukhali yezinga eliphezulu, eklanywe ngezindwani ezi-4 futhi ihlelwe ngezingqimba ezi-2 ngesimo sesiphambano, ngakho inqubo yokuhlanza ukudla ishesha kakhulu. futhi ilula kakhulu.
Umthamo wembiza enkulu ye-blender ungafika kumalitha ama-2 ukusiza ukugaya ukudla okuningi ngesikhathi esisodwa. Ngaphandle kwalokho, ngenxa yesivinini esi-2 esihlukene sokugaya, kulula ukulungisa, ngakho-ke kungenzeka ukugaya ukudla okuhlukahlukene ngobulukhuni obuhlukene.
Injini engaphakathi emshinini imbozwe into enhle yensimbi ecwebezelayo, idala ukugqama kwalo mkhiqizo we-AC15. Izingxenye zihlakazwa kalula, ngakho-ke ukuhlanza ngemva kokulungiswa kokudla akunzima. Intengo yokuthengisa yale blender yomlingo ingu-VND 599,000.
3.3 Inhlamvu yomlingo A96
A96 eya I-Multi-function Magic Blender ihlanganisa imisebenzi ehlukene engu-6 ukuze omama bamakhaya bakwazi ukwenza izinhlobonhlobo zokudla okumnandi zomndeni, okusiza ukugcwalisa izakhi zomzimba ngokugcwele.
Ungakwazi ukugaya futhi upheke imifino kalula, wenze u-ayisikhilimu noma upheke amasobho, wenze ubisi lwamantongomane kalula futhi ngokushesha khona lapho kulo mshini we-Magic A96. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye ube nomsebenzi wokushisa nokupheka izitsha zenyama esikhundleni sokupheka kwendabuko emabhodweni avamile ngenkathi ugcina izakhi zezitsha ziqinile.
Idizayini yalo mshini icocekile, ayinamandla njengamanye ama-blenders emisebenzi eminingi, idizayini ewubukhazikhazi, ifanele noma yisiphi isikhundla ukusiza ukukhulisa ubuhle bekhishi lakho. Injini yomshini isebenza ngamandla inamandla okugaya afinyelela ku-1000W kanye namandla okushisa angama-800W, ngakho-ke isivinini sokujikeleza singafinyelela ku-30,000 rpm.
Ngaphezu kwalokho, i-blade yakhelwe ngendlela embaxambili, enemiphetho emi-4 ukusiza ukusebenza kahle kakhulu. Ngenxa yalokho, amandla okuhlanza nokupheka ukudla kwenzeka ngokushesha ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabathengi. Intengo yamanje yokuthengisa yomshini we-Magic multi-function yi-VND 1,450,000.
Imbiza yomkhiqizo yenziwe ngengilazi ekwazi ukumelana nokushisa okuphezulu, esivalweni sinesici esihlakaniphile esisebenza kuphela uma isivalo sivalwe ngokuqinile ukuze kuqinisekiswe ukuphepha okuphezulu. Iphaneli yokulawula ihlelwe ngokwesayensi nomsebenzi wesikhathi esingafika emahoreni ayi-12 ukukusiza ukulawula isikhathi sokusebenzisa nokupheka.
Bona okwengeziwe: Izixube zezandla eziyi-8 ezihamba phambili ezithengiswa kakhulu ezishibhile
3.4 I-magic bullet grinder yenyama A04
I-Magic bullet A04 blender inezici eziningi ezahlukahlukene eziletha ukwaneliseka okuphezulu ongazisebenzisa. Amandla okusebenza omshini angama-400W ukuhlangabezana nezidingo zokugaya ukudla okusha okufana nenyama, inhlanzi noma izinongo ekuphekeni.
Idizayini ehlangene, enombala omhlophe odonsa amehlo, izingxenye zomzimba zenziwe ngepulasitiki yekhwalithi ephezulu ephephile kubasebenzisi. I-blade eyenziwe ngensimbi engagqwali ngokuqinisekile ayigqwali, ayigqwali, inempilo ende yenkonzo. Imbiza yenziwe ngengilazi esobala enokumelana okuphezulu kwe-shatter, okwenza inqubo yokuhlanza ibe lula futhi ihlanzeke.
Umthamo wodaka ungama-1.5 amalitha, i-blade ebukhali isiza inqubo yokugaya ukuze kuzuzwe ukusebenza kahle okuphezulu, isikhathi esifushane lapho umthamo wokudla uchotshozwa. Imikhiqizo yomshini womlingo ithengiswa emakethe ngama-VND angama-350,000.
3.5 Magic bullet A14
I-Magic bullet A14 blender yaziswa kakhulu abathengi baseVietnam ngekhwalithi nenani lomkhiqizo. Umthamo wesigayo mkhulu, ungakwazi ukugaya ngokuphelele ukudla okungu-500g ngesikhathi esisodwa ngesikhathi esifushane.
Lo mugqa womkhiqizo ungagaya kokubili inyama noma ama-smoothies, kanye nokunye ukudla empilweni, ngakho-ke kubhekwa njenge-blender ye-multi-function elula kakhulu namuhla. Le blender ye-Magic Bullet ifakwe izinsimbi ezimbili ezenziwe ngezinto zensimbi engagqwali, kanye namandla okusebenza omshini afinyelela ku-400W, ngakho-ke ukudla kugaywa kahle kaningi kunezinye izixube. .
Idizayini ewubukhazikhazi, izingxenye ezihlukanisekayo, ukuqaqa okulula kwenza ukuhlanza kube lula futhi kuhlanzeke ngokwedlulele. Ngesikhathi sokusebenza, umshini uzocisha ngokuzenzakalelayo lapho ulayishwe kakhulu ukuvimbela umshini ukuthi ungashi.
Ngama-500k kuphela, ungathenga i-A14 multi-function blender yempilo yansuku zonke yawo wonke umndeni. Inqubomgomo yewaranti yomlingo ingu-1 ukuya ko-1 wokushintshana phakathi konyaka ongu-1 kusukela ngedethi yokuthengwa komkhiqizo.
Bhekisela: [Review] Iyiphi i-blender ye-Bluestone enhle? Imininingwane imikhiqizo emi-5
3.6 Magic bullet A21
I-A21 iyinhlanganisela yangempela yeMagic Bullet eyithuluzi elisebenza ngezindlela eziningi kuwo wonke amakhishi omndeni. Umkhiqizo ungangena esikhundleni semishini eminingi eyahlukene, wenze imisebenzi eminingi njengokwenza ama-smoothie, ukwenza ama-juicer, ukugaya inyama, u-whisking amaqanda, ukuxova inhlama…
Amandla alo mkhiqizo asebenza ngokuqinile kuze kufike ku-250W, ukunikezwa kwamandla okudingekayo lapho umshini usebenza 220-240V. Ngaphandle kwalokho, umshini uklanywe ngama-blade angu-2, i-blade engu-1 inomumo wesiphambano futhi i-blade engu-1 yakhiwe ngendlela eqondile, efanelekile ukucubungula ukudla okuhlukahlukene ngesikhathi esifushane ngokusebenza kahle kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, lona umugqa wama-magic bullet grinders anezesekeli eziningi, ezinemininingwane ehlukene engama-21 ongakhetha kuyo kanye nokunethezeka okuhle kakhulu. Ngakho-ke, umkhiqizo uyakwazi ukwenza izitsha eziningi ezahlukene futhi ulungiswe kalula ngendlela yeziphuzo ezisezingeni eliphezulu ngokusebenzisa ibhuku leresiphi elinikezwa umkhiqizo kumakhasimende.
Izingxenye zenzelwe ukuthi zihlakazwe futhi zihlakazwe kalula, ngakho-ke inqubo yokuhlanza iyashesha kakhulu, kuthatha imizuzu embalwa kuphela ngemuva kokusetshenziswa ukuthi usuqedile ukuhlanza le blender yomlingo we-A21. Uma kuqhathaniswa nezinzuzo ezilethwa umkhiqizo, intengo inengqondo ngokwedlulele futhi ithengiswa emakethe nge-VND 1,090,000.
Amanothi lapho usebenzisa i-Magic Bullet blender
Uma usukwazi ukusisebenzisa, I-Magic Bulle blendert, udinga ukunaka lezi zindaba ezilandelayo, ukuze uzuze ukusebenza kahle kanye nokuqinisekisa ukuphepha komshini nomsebenzisi.
Ingxenye yenjini kufanele uyihlanze ngokusula ngendwangu emanzi, ungasebenzisi ngokuphelele amanzi ukugeza.
Uma ugaya, ungavumeli injini isebenze ngokuqhubekayo ngaphezu kwemizuzu emi-2 ngoba uma ugaya isikhathi eside, injini izoshisa. Kufanele umise umshini imizuzwana engu-30 futhi uqhubeke ukuwusebenzisa ukuze uzuze ukusebenza okuphezulu uma usebenzisa.
Amanothi abalulekile uma usebenzisa umshini womlingo
Umthombo wamandla oxhunyiwe njalo uqinisekisa ukusetshenziswa kwamandla omshini ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukusebenza akulayishwa ngokweqile uma kuqhathaniswa nomthombo wamandla wasekhaya.
Uma umshini unqanyulwa ngenxa yenjini eshisayo, isikhathi sokuvala salo mugqa singamaminithi angu-45-60, ngakho-ke sicela ukhiphe i-outlet ukuze uvumele umshini uphumule.
Lapho ugaya-ukugaya ukudla, khetha udaka ne-blade evumelana nezidingo zakho.
Ngokuvamile, yonke imigqa I-Magic blender Zonke zinezinzuzo ezivelele, ziletha izinsiza ezinhle ekuphileni kwansuku zonke kwamalungu omndeni wakho. Uma usangabaza ekukhetheni i-blender esebenzayo, akufanele uphuthelwe imikhiqizo engu-6 ephezulu ebiza imali kulesi sihloko.
Xem Thêm Review máy làm sữa hạt đa năng Bluestone SMB-7329 | Muasalebang
5+ Cách làm nước ép xoài chua ngọt, kích thích vị giác | Muasalebang